Beyou dia manolo-tena amin'ny fikarohana sy fampandrosoana ny famokarana extruder, serivisy fijanonana iray!
1. fehezin'ny PLC, efijery iray-tsindry efijery, tsotra sy azo antoka.
2.Ny fandinihana sy ny props miaraka amina fitaovana maharitra mahatohitra hafanana ambony ho an'ny androm-piainana lava kokoa.
3.Telo karazana fifehezana, toy ny elatra nohavaozina mekanika, lozisialy namboarina pnatic ary elatra namboarina pnemika
4.Volam-pandrefesana voajanahary, ahitsy tsara ny fahazoan-dàlana eo anelanelan'ny mpanapaka sy ny modely mba hampiorina tsara kokoa ny fandidiana.
1.Polymer dia mifangaro tanteraka. 2.Ny fotoana onenana mitsonika dia nitombo tsara. 3.Ny efitrano fandraisam-bahiny namboarina manokana dia afaka misoroka ny fizotran-damosin'ny ampahany ary manamora ny fanadiovana ny mason'ny masoandro. 4.Ny fifehezana ny mari-pana mialoha dia mampihena ny viscosity malemy. 5.Ampifanaraho amin'ny fomba samihafa ny fomba fanolanana sampy. 6. Haingam-pandeha haavo ambonin'ny tany dia haingana. 7.Ny ampahany amin'ny fitaovana miovaova sy miparitaka dia azo averina ampiasaina ary ampiasaina indray. Ny fitsaboana taorian'ny valin'ny polymerization dia ...
1. Extruder visy kambana kely dia ampiasaina hanandramana ny fahombiazan'ny fitaovana, toy ny loko, ny plastika.
2. Extruder kambana kely extruder dia ampiasaina amin'ny fampivoarana ny fizarana vaovao.
1.CTS-H andian-tsarimihetsika dia fitaovana fampitaovana sy boaty fiarovana.
2.Ny fizarana fanodinana dia famolavolana modular fananganana, manana fiasa miovaova izy ireo amin'ny fampifangaroana sy ny fitrandrahana.
3. Ny zava-bitany dia ambony kokoa, ny kalitao dia azo antoka kokoa, raha ampitahaina amin'ny vokatra avo lenta vahiny, ny extruder dia manana tombony amin'ny vidiny tsara sy serivisy aorian'ny fivarotana tonga lafatra.
1. Fanalefahana, fampidirana torolàlana, famolavolana rafitra vaovao, fanamafisana ny sisin-tany fiarovana, fikosoham-bolo avo nify mafy, fitotoana tombo-kase sy tombo-kase, rafitra fanamafisam-peo fanosorana tery tsy miankina ary fampifangaroana fiarovana azo antoka aotra tsy nampidirina;
2. Ny vatan'ny masinina dia mandray ny endrika nohamafisina;
3. Ny rafitra fanaraha-maso mandeha ho azy Elektronika dia fitaovana avo lenta avo lenta na rafitra fakan-tsarimihetsika, ary ny singa fanaraha-maso lehibe indrindra dia mampiasa ny marika nafarana;
4. Ny barika, singa matevina ary boaty fanodinana avy amin'ny extruder lehibe dia novokarin'ny ivon-toeran'ny milina CNC.
1.CTS-D andian-dahatsoratra dia fitaovana miaraka amin'ny avo-torque gearbox, ny hafainganam-pandeha rotary afaka hahatratra 800 RPM.
2.Ny fitaovana samihafa amin'ny barika sy visy dia azo fidina.
3.Ny fizarana fanodinana L / D dia mety ho 24 ka hatramin'ny 64.
4. Ny mari-pana barika voafehy tsy miankina, omena laharam-pahamehana ny fifehezana PLC.
Ny fitaovana avo lenta dia manampy ny mpanjifa hiverina haingana kokoa
CTS-CD andian-dahatsoratra roa ambongadiny extruder ahitana ampahany roa.
1.Ny dingana voalohany dia extruder kambana mihodina miaraka amin'ny fiasa mifangaro mba hahitana ny plastika, ny fampifangaroana ary ny homogenisation ny fitaovana, ary tsy misy reflux press-back an'ny loha, mba hahatratrarana ny fifangaroana tsara indrindra toetran'ny fitaovana.
2.Ny dingana faharoa dia extruder tokana miaraka amin'ny fihodinan'ny hafainganam-pandeha ambany, izay mety hahatratra ny fitrandrahana insulation material ary hialana amin'ny famotehana amin'ny fanodinana hafanana. Miaraka amina traikefa matanjaka matanjaka izy io, manana sehatra fanodinana fanodinana karazana rafitra milina vaovao sy singa visy izy.
Fitaovana famahanana na feeder dia fitaovana iray ahafahana manome antoka ny famahanana maharitra sy tsy miovaova fitaovana, izay mety amin'ny karazana poti, vovoka, additives, mpanampy sns. Araka ny fepetra takiana samihafa amin'ny famahanana mazava, ny feeder dia azo zaraina ho mpamatsy boky sy fatiantoka amin'ny mpanome lanja. Araka ny haavon'ny fivezivezena ara-materialy, ny feeder koa dia azo zaraina ho feeder visy kambana sy feeder visy tokana. Eo ambanin'ny fepetra fa ny hakitroky ny vady ...